Mavhidhiyo matatu matsva emamwe mashandiro eApple Watch Series 4 | Ndinobva mac
Apple yakazvipira kune zvigadzirwa zvitsva zvakatangwa svondo rapfuura uye nekudaro zvinowedzera mavhidhiyo kwese kwese nezve makuru maficha uye mabasa eaya. Mune ino kesi irondedzero yemavhidhiyo matatu mairi iyo inotiratidza makwikwi muAction app, maitiro ekufona uye maitiro ekuyera moyo yedu.
Zviripachena iyo itsva Apple wachi ine akati wandei mamwe mabasa anonakidza, asi mune ino kesi ndiko kutendeuka kweaya matatu uye ndosaka vachiratidzwa kwatiri pavhidhiyo. Zvine musoro zvinotarisirwa kuti mumazuva mashoma anotevera mamwe mavhidhiyo akafanana anoramba achibuda nezvitsva zve wachi.
Pamusoro pewebsite yeApple, YouTube ndiyo network yemagariro yakasarudzwa kuvhura mavhidhiyo
Pane dzinoverengeka Apple yakaparura mavhidhiyo kutanga pawebhusaiti yayo uye wozoashambadzira pane yayo YouTube chiteshi, ino nguva nhatu mavhidhiyo matsva. Yokutanga yemavhidhiyo ndiyo inoratidza kushanda kwe makwikwi muAction app. Apple yakatarisa mumakore achangodarika pane chiitiko chevashandisi paApple Watch uye zvinoita sekunge yawana zvibereko zvakanaka, saka inosimudzira zvishoma.
Vhidhiyo inotevera inotiratidza mashandiro anogona kuitwa neApple Watch neiyo zviyero zvinotora zvekurova kwemoyo wedu. Imwe yesimba reiyi nyowani watchOS 5 uye zviripachena yeiyo nyowani Series 4 nema sensors ayo matsva:
Uye pakupedzisira uye nekuda kwekuvandudzwa kwakaitwa muSiri mubatsiri, tinogona ita mafoni nenzira inoshanda chaizvo uye yakapusa. Uye zvakare, pamwe neLTE (Cellular) mashandiro emamodeli matsva atinozopedzisira tave kuSpain nedzimwe nyika, hazvichadiwe kuve ne iPhone pamusoro yekufonera:
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » Mavhidhiyo matatu matsva emamwe mashandiro eApple Watch Series 4
Iyo nyowani beta ye macOS Mojave 10.14.1 yatove mumaoko evanogadzira
Nakidzwa neyekare Windows Solitaire pane yako Mac ine h Solitaire